Waa kuma Cabdi Saciid - Wasiirka cusub ee Arrimaha Soomaaliya? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa kuma Cabdi Saciid - Wasiirka cusub ee Arrimaha Soomaaliya?
Wuxuu ahaa gacanta-midig ee Farmaajo, isagoo soo qabtay xilka la-taliyaha amniga Qaranka iyo agaasimaha Villa Somaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq, ayaa Maanta xilkii laga qaadey, isagoo lagu bedelay Cabdi Saciid oo Farmaajo uu keensadey.
Digreetada Rooble laguma sheegin sababta lagu eryay Wasiirka, laakiin xogaha KON waxay sheegaan in soo-jeedinta xilka qaadista ay ka timid Farmaajo oo dano shaqsi isku qabteen.
Farmaajo ayaa ka dalbadey Rooble inuu xilka ka qaado Maxamed C/risaaq kadib markii uu ogaadey inuu ku jiro olole, isagoo ka faa'ideysanaya xasnaadda diblomaasi iyo xilka Wasiirka.
Waa kuma ninka lagu bedelay?
Cabdi Saciid wuxuu 1971 ku dhashay degamda Jowhar, Sh/Dhexe, oo 90-KM uga beegan dhanka Waqooyi magaaladda Muqdisho, laakiin qabiil ahaan wuxuu kasoo jeeda Puntland.
Cabdi Saciid waxaa xilka la-taliyaha amniga qaranka u magacaabey Farmaajo 2017, isagoo aan lahayn khibrad iyo aqoon hore oo la xiriirta arrimaha amaanka iyo xagga Ciidanka.
Wuxuu kamid ahaa dadkii ka cararey dalka markii dagaalka sokeeye billowday 1991, isagoo ku galay Yurub qaxooti ahaan, Wuxuu noloshiisa kusoo qaatey Holland iyo UK, oo markii uu la qabsan waayay dhaqanka iyo luuqadda uga guurey Mareykanka.
Waa nin ku jira da’aadda Kontomeeyadda, wuxuu leeyahay taariikh mugdi ah, oo ka buuxdo hawiye naceyb, qabyaalad iyo musuq-maasuq. Xili kasta oo nin Daarood ah Madaxweyne ka noqdo dalka, waxaa laga dhigaa la-taliyaha Amniga Qaranka [C/llaahi Yuusuf iyo Farmaajo] ayuu u noqday.
Tan iyo markii la magacaabey 2017, Cabdi Saciid wuxuu si joogto ah u wadey marin-habaabin uu ku sameynayo dowladaha Beesha Caalamka ee taageera Soomaaliya, isagoo siinaya xog qaldan iyo sheekooyin mala awaal ah oo ku saabsan bulshadda ganacsatada ah ee degan Muqdisho iyo siyaasiyiinta Hawiye [Halkan ka akhri].
C/llaahi Yuusuf oo Muqdisho ka barakiciyay 1.3 milyan oo qof, ayaa ka dhigay Cabdi Saciid la-taliyihiisa amniga. [Halkan ka akhri]. Cabdi Saciid wuxuu ku tagey Wasaaradda Arrimaha Dibadda shaar qabiil, waxaana laga wada dheragsan yahay inuu beegsan doono shaqsiyaadka Hawiye ee katirsan Wasaaradda iyo kuwa Safiiradda dibadda jooga.